Ngoko ke, thina anayithathela gotten imibuzo embalwa lately malunga dating kwi-China
Yintoni le rhoqo kukhokelela ngu nzima parental inxaxheba koluntu budlelwane nabanye kwaye dating
Ungaya ukufunda malunga ngocoselelo-creepy umtshato kwiimarike kwi-China, apho abazali ukumisela isixhobo uluhlu lophinda-phindo izibhengezo zabo omdala oonyana neentombi ukuya kwezo meko mates. Ngexesha lento ayi ngenene indlela ezininzi Isitshayina kuhlangana zabo elizayo amaqabane simemo kwakhona, umtshato kwiimarike ingaba kwaye ndonwabe ngokufanayo emehlweni abo, nkqu ngakumbi Westernized izixeko ngathi i-shanghai. Ngexesha i-West sibe zama ukudlala ngayo elihle kwaye hayi kuba intsingiselo uqhagamshelane ne-umntu, China ke eqhelekileyo ukuba okubhaliweyo okanye umnxeba ezininzi umphinda-phinde ngo mhla, nkqu ukuba ubudlelwane ayi nkqu ekude ezinzima kodwa. Oku ezithile zenkcubeko umahluko, kwi-bam amava, omkhulu isizathu ngoko ke, abaninzi intercultural budlelwane nabanye kusilela ndiyazi omnye kubekho inkqubela ndandidibana texted kum ezintlanu phambi phinda-phinda lunch elandelayo mini – ezinzima hayi-hayi kuba nam kodwa esezantsi umgaqo-nkqubo kuba yakhe. Umntu inje nicinge ukukhombisa u-zonke kwezigqibo ngendlela Isitshayina dating, kwaye abanye girls thatha kakhulu seriously.
Xa ndicela a kubekho inkqubela ntoni yena babefuna ukwenza kuba umhla kwaye yena nje zange yaphendula
Likwakwazi commonplace ukuzisa umhlobo noku, kodwa hayi kuba kabini umhla – ngu ngakumbi na chaperon, sethutyana okanye ukhuseleko net. Nakuba kunjalo, konke oku kuthetha ukuba kwi-China ngokwayo, ukuba ukhe ubene dating umntu seriously, umtshato ngu ubuncinane kwi-ithebhule. Nkqu ukuba ke ayisosine enjalo omkhulu yaba kuye ubuqu, ke kwakhona into ke ngomhla wakhe engqondweni kwaye ukuba wakhe abazali baya kuba izisa phezulu nje malunga lonke ixesha babe ndimbone. Kangangokuba, ekubeni intimate ngaphambi kokutshata kubaluleke kakhulu ngaphantsi ngokufanayo kwi-China kwe kwi-West, nangona oku akunjalo kakhulu kunjalo simemo kwakhona phakathi younger, ngakumbi urbanized Isitshayina. Fact omzimba, nangona, ukuba ukhe ubene intimate ngexesha dating, kukho nomdla ukungena ukuba umtshato ephiwe ulundiname. Xa ezi imithetho ngamanye amaxesha relaxed kuba Isitshayina dating foreigners, ukuze ke akusoloko kunjalo. Kuba abantu, izinto yayo yonke akunjalo, njengoko engqongqo: pha ayi – fervent umtshato-indawo ephelela kuyo-umhla-countdown (aka i kakhulu-ixwebhu”leftover abafazi”- phenomenon, kwaye familial koxinzelelo tends ukuba abe kancinci ekhanyayo kunokuba ngumsebenzi ngenxa yabo ibhinqa counterparts.
Ukuba wathi, ezongezelelweyo stresses ingaba zikho
Thina anayithathela wathetha phambi malunga ezinye yezemali phezu kwendawo iimfuno abantu rhoqo kufuneka ekuzalisekiseni ukuze ulungele kuba elungileyo mate: indlu, car kwaye steady umsebenzi ingaba de facto iimfuno kuba dating kwiindawo ezininzi izangqa, kwaye kunye ngokwesini imbalance abanye yezigidi ezingaphezulu amadoda, abafazi unako rhoqo afford ukuba abe choosy. Ndine ibhinqa umhlobo abo, xa kumhla nge Isitshayina guy, kukhankanywe ukuba yena akusebenzi khange ingakumbi abachaphazelekayo malunga nokuba yena owned imoto okanye hayi. Wakhe umhla literally ayikwazanga kukholelwa yakhe comment kwaye ngoko nangoko balingwe ukucwangcisa ixesha kuba omnye umhla. Ngokupheleleyo, yenkcubeko ugxininiso lwalo kwi marrying phambi kwexesha, ingakumbi kuba abafazi, kuthetha ukuba dating ngu imbued kunye kakhulu ngakumbi intsingiselo kwaye ayi into kuthatyathwa lightly. Ngoku ukuba uyayazi kancinane malunga dating inkcubeko kwi-China, kuqwalasela yintoni Isitshayina abantu kufuneka kuthi malunga zabo namanani romanticcomment partners. Ezi izifundo ukusuka Yoyo Isitshayina ke Intermediate Indlela iimpawu interviews kunye abantu ngomhla ezitratweni of China. Ezilandelayo ezi emfutshane interviews, Yang yang okunqanda phantsi ebalulekileyo ulwimi amanqaku zifunyanwa iimpendulo zabo. UMICHAEL HURWITZ wachitha ezintandathu ubudala kwi-i-shanghai ngokwenza i abancinane izinto uncedo bridge i-yenkcubeko kwaye linguistic isithuba phakathi China kwaye West. Ngoku emva kwi-United States studying amashishini kunye Isitshayina, Michael enjoys i-reggae umculo, lakhe hometown basketball iqela le comment ingxwaba Wizards, kwaye sele a handful ka-tattoos abe nento yokuba kodwa hayi zichaza. Uhlobo tone amanani emva ngamnye pinyin syllable ngoku nqakraza guqula qhosha ukutshintsha nabo kwi-tone marks